August 2013 ~ Myanmar Forward
Windows 8 ISO ဖိုင်အားရယူနိုင်ပါပြီ
Posted by drmyochit Saturday, August 31, 2013, under နည်းပညာ | 1 comment
Windows 8 ကိုအသုံးပြုချင်သူတွေအတွက် Windows 8 ကိုအောက်က link မှာ download ရယူနိုင်ပါပြီ။ ISO ဖိုင်အနေနဲ့တင်ပေးထားတာကြောင့် USB Stick ထဲထည့်ပြီး Boot stick အနေနဲ့အသုံးပြုဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ DVD ခွေမှာ ခွေရိုက်ပြီး Windows 8 Installer DVD အဖြစ်အသုံးပြုလိုလျှင်ပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်ကြိုက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Windows 8 Serial Key များပါ တစ်ပါတည်းထည့်ပေးထားပါတယ်။ Windows 8 ISO ဖိုင်ကိုအောက်က link မှာရယူပါ။
Windows 8 ISO ဖိုင်အားရယူရန်
Windows 8 Serial Key များ
Posted by drmyochit Saturday, August 31, 2013, under နည်းပညာ | No comments
ကျွန်တော်သုံးဖူးသမျှ Task killer တွေထဲမှာ ဒီကောင်အကြိုက်ဆုံးပဲ။
ကျွန်တော့်ရဲ့Top Application တွေထဲမှာ ဒီကောင်လေးလဲပါတယ်။
ထွက်တာတော့4ရက်ကတည်းကဆိုတော့ကြာနေပါပီ။အဟောင်းထဲက
အကောင်းလေးပေါ့။ဒီကောင်လေးမှာ Function4မျိုးပါ ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ စက်တွေထဲမှာ
မလိုအပ်တဲ့ Junk ဖိုင်တွေအကုန်လုံး အသေးစိပ်ရှာပီး ဖျက်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်
စက်ကိုလုံးဝပေါ့သွားစေပါတယ်။App တစ်ခုကို uninstall လုပ်လိုက်ပီဆိုရင်
တော့မှားသွားမယ်။အဲ့လိုကျန်ခဲ့တဲ့ အမှိုက်တွေ Junk ဖိုင်တွေကိုလည်းဖျတ်
Download>>>>mirrorcreator (or)zippyshare (or)mediafire
Home Screen တွင် Task Killer ကိုshortcut အဖြစ်တင်ရန် အိမ်ပုံလေးကိုနှိပ်ပေးရမှာပါ။
ADALAFIL (တာဒါလာဖေးလ်) ယောက်ျားသုံးဆေး
Posted by drmyochit Saturday, August 31, 2013, under ကျန်းမာရေး | No comments
ကာမအားဆေးများ အမြဲသုံးရင်ဘာဖြစ်နိုင်သလဲ ဆေးနာမည် စာလုံးပေါင်းပြောပါ။
Tadalafil (တာဒါလာဖေးလ်) ဆေးကို Adcirca နဲ့ Cialis Tablets စားဆေးအနေနဲ့ ထုတ်လုပ်ရောင်း ချတယ်။ ဆေးဝါးဗေဒအရ ပြောရရင် Inhibition of phosphodiesterase type5(PDE5) အမျိုးအားဖြစ် တယ်။ အရင်ဆုံး သုံးခဲ့တာက Pulmonary arterial hypertension အဆုပ်ရောဂါတမျိုးအတွက် ဖြစ်တယ်။ အခုခေတ်စားလာတာကတော့ Erectile dysfunction ပန်းသေ-ပန်းညှိုးအတွက်ဖြစ်တယ်။ Benign prostatic hyperplasia (BPH) ခေါ်တဲ့ ယောက်ျား အသက်ကြီးသူတွေမှာ အဖြစ်များတဲ့ ဆီးကျိတ်ကြီးခြင်း အတွက်လဲ သုံးပါတယ်။
• Priapism ခေါ်တဲ့ ၄ နာရီအထိ ကျားလိင် အင်္ဂါသန်မာ နေတာကျ မသွားတာမျိုးလဲ တချို့မှာ ဖြစ်တတ် တယ်။
• တကယ်လို့ ခေါင်းမူးတာ၊ ရင်ပတ်နာလာတာ၊ သတိလစ်ချင်သလို ဖြစ်လာတာ။ မျက်စိအမြင်ဝေဝါး လာတာ၊ နာဲးမှာ ဝီဝီမြည်သံကြားလာတာ၊ နားကြားမကောင်းတာတွေ ဖြစ်လာရင် ဆေးကိုချက်ချင်းရပ်ပါ။ အရက်နဲ့တွဲမသောက်ရပါ။ သွေးတိုးကျဆေးသောက်နေရရင် ဆရာဝန်ပြောပါ။
• ဒီဆေးဟာ လိင်က တဆင့်ကူးစက် ရောဂါတွေကို အကာကွယ်မပေးပါ။ ကိုယ်ဝန် မရအောင်လဲ တား မပေးပါ။
Battery Booster Full အသုံးပြုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် 30ရက်နေ Update လေးပါ
Android ဖုန်းကိုင်ဆောင်သူတိုင်း ဘက်ထရီ အားအကုန်လွယ်တဲ့ ပြသာနာ ဖြစ်ဖူးကြမှာပါ ..ဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲဆိုတော့ Battery Manangement ကောင်းကောင်းမလုပ်တတ်လို့ပါပဲ. .ဒီဆော့ဝဲလ် လေးကတော့ ဘက်ထရီ manangement ကောင်းစြွ ကိုင်တွယ်နိုင်မှာ ဖြစ်သလို တခြားတခြားသော features များစွာနဲ့ မိမိဖုန်းကို တစ်ဖက်တစ်လှမ်းကနေ အကျိုးပြုပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ် ..ဒီဆော့ဝဲလ်လေးက မိမိဖုန်းရဲ့ battery charge(battery charge မှာဆိုရင် မိမိဖုန်းရဲ့ battery usage ကို ခြေရာခံလိုက်ကြည့်ပေးမယ့် auto updating live chart ပါဝင်) battery capacity, temperature, voltage, etc တွေ နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး တိကျသေချာတဲ့ အချက်အလက်တွေ ကို အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီပေးစွမ်းထားမှာ ဖြစ်ပါတယ် …..ဒါအပြင် Battery Tweak မှာ ဆိုလည်း အားလုံး လိုချင်ကြတဲ့ Smart Battery Saver, wifi and bluetooth စတာတွေ ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်.
ဆီးရီးယား အစိုးရက စကာ့ဒ်ဒုံးကျည်များကို နေရာ ရွှေ့ပြောင်း
Posted by drmyochit Saturday, August 31, 2013, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
ဒမတ်စကပ် သြဂုတ် ၃ဝ
ဆီးရီးယားသမ္မတ ဘာရှာအယ်လ် အာဆတ်၏ တပ်ဖွဲ့များသည် ဒမတ်စကပ်မြို့တော် မြောက်ပိုင်း ရှိ နိုင်ငံ၏ အကြီး မားဆုံး စစ်ခရိုင်ဖြစ်သည့် Qalamoun တောင်ခြေ စစ် အခြေစိုက်စခန်းမှ
စကာ့ဒ်ဒုံးကျည်များနှင့် ဒုံးပစ်လောင်ချာ ဒါဇင်ပေါင်းများစွာကို အနောက်အုပ်စု၏ တိုက်ခိုက်လာနိုင်မှုမှ ကာကွယ်သည့် အနေဖြင့် ရွှေ့ပြောင်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သြဂုတ် ၃ဝ ရက် အင်တာနက် သတင်းတစ်ရပ်အရ သိရသည်။ သို့ရာတွင် အာဆတ် တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ထိန်းချုပ်ထားသည့် ဆီးရီးယားနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းတွင် စစ်လက်နက် ပစ္စည်းများကို အကန့်အသတ်ဖြင့်သာ တပ်ဖြန့် ချထားကြောင်း သိရသည်။ ဆီးရီးယားနိုင်ငံ အနောက်ပိုင်းတွင် အခြေစိုက် သည့် အမှတ်(၁၅၅) ဒုံးတပ်မဟာသည် ရွှေ့ပြောင်း ပစ်ခတ်နိုင်သော စကာ့ဒ်ဒုံးကျည် ဒါဇင်ပေါင်း များစွာကို ၎င်းတို့၏ အခြေစိုက်စခန်းမှ မြောက်ဘက်ရှိ Homs မြို့သို့ သယ်ယူလျက် ရှိသည်ကို သူပုန်ကင်းထောက် အဖွဲ့များမှ တွေ့မြင်ခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
သူပုန်များ၏ အဆိုအရ ဒုံးကျည် အစိတ်အပိုင်းများ၊ ဒုံးပစ်လောင်ချာများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို တာပေါ် လင်စများဖြင့် ဖုံးအုပ်ကာ နောက်တွဲယာဉ်များဖြင့် သယ်ဆောင်၍ ရွှေ့ပြောင်းလျက်ရှိကြောင်း၊ ၎င်းရွှေ့ပြောင်းမှုတွင် ကီလိုမီတာ ၃ဝဝ ကျော်အထိ ရောက်ရှိ ပစ်ခတ်နိုင်သည့် အရှည် ၁၁ မီတာရှိ စကာ့ဒ်ဒုံးကျည် နှစ်ဒါဇင်ထက် မနည်း ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
ဆလီနာသည် လှပပြီး ချစ်စရာကောင်းသူ ဖြစ်ကြောင်း ကယ်လီကလာ့ခ်ဆန် ချီးကျူးပြောဆို
လော့စ်အိန်ဂျလိစ် သြဂုတ် ၃ဝ
ကမ္ဘာကျော် အဆိုတော် ကယ်လီကလာ့ခ်ဆန်က ဒစ်စနေး ရုပ်သံမင်းသမီး အဆိုတော် ဆလီနာဂိုမက်ဇ် သည်ကမ္ဘာတွင် အလှဆုံး မိန်းကလေးများအနက် တစ်ဦးအပါအဝင် ဖြစ်ကြောင်း ချီးကျူး ပြောဆိုခဲ့သည်။
ထို့အပြင် ဆလီနာသည် လှပပြီး ချစ်စရာကောင်းရုံသာမက ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီး အထက်တန်းကျသော အလှကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြောင်း ကလာ့ခ်ဆန်က သူမ၏ တွစ်တာဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ပြောကြားထားသည်။
ဆလီနာဂိုမက်ဇ်သည် သြဂုတ် ၂၅ ရက်က အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု နယူးယောက်မြို့ ဘဂွတ်ကလင်းရှိ ဘာကလေ ခန်းမ၌ စည်ကားသိုက်မြိုက် စွာကျင်းပခဲ့သော MTV ဂီတဗီဒီယို ဆုပေးပွဲ အခမ်းအနား၌ သူမ၏ Come and Get It တေးသီချင်းဖြင့် အကောင်းဆုံး ပေါ့ပ်ဗီဒီယိုဆုကို ရရှိခဲ့သည်။
Posted by drmyochit Saturday, August 31, 2013, under ဗဟုသုတ | No comments
ဂြိုဟ်တု သယ်ယူရေး ဒုံးပျံသစ် Epsilon ကို ပစ်လွှတ်ရန် နောက်ဆုံး ၁၉ စက္ကန့်ရောက်မှ ဖျက်သိမ်းလိုက်ခြင်း
သိပ္ပံပညာရပ်ဆိုင်ရာ ရှာဖွေ လေ့လာရေး ဂြိုဟ်တုကို သယ်ဆောင်သွားမည့် ဂြိုဟ်တု သယ်ယူရေး ဒုံးပျံသစ် Epsilon ကို ဂျပန်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း Uchinoura Space Center မှ သြဂုတ် ၂၇ ရက်နေ့တွင် ပစ်လွှတ်ရန် အသင့်ပြင်ဆင်ထားပြီး ပစ်လွှတ်ရန် နောက်ဆုံး ၁၉ စက္ကန့်တွင်မှ အစီအစဉ်ကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ကြောင်း Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) က ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ ဒုံးပျံသစ် Epsilon-1 သည် လေထု တုံ့ပြန်မှုကို သိရှိရန် အတွက် ရောင်စဉ်တန်း ကိရိယာ အသုံးပြု စောင့်ကြည့် လေ့လာရေး ဂြိုဟ်တု (SPR-INT-A)ကို သယ်ဆောင်လျက် Uchinoura Space Center မှ ဒေသ စံတော်ချိန် မွန်းလွဲ ၁ နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင် ပစ်လွှတ်ရန် စီစဉ်ထားလျက်ခဲ့သည်။ ဒုံးပျံသစ်သည် ၁၉၉၇ ခုနှစ်နှင့် ၂ဝဝ၆ ခုနှစ်အတွင်း အာကာသ အတွင်းသို့ အောင်မြင်စွာ လွှတ်တင်နိုင်ခဲ့သည့် M-5 ဒုံးပျံ နေရာတွင် အစားထိုးနိုင်ရန် ဒီဇိုင်း ရေးဆွဲထားကာ နောက် ထပ် အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို ထပ်မံ ကြေညာပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း JAXA မှ တာဝန်ရှိသူမှ ပြောကြားခဲ့သည်။
လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး ဥပဒေကြောင့် အမေရိကန် သတို့သားနှင့် မက္ကဆီကို သတို့သမီးတို့ နယ်စပ်တွင် လက်ထပ်ခဲ့ရ
အယ်လ်ပါဆို သြဂုတ် ၃၀
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှ အမျိုးသား တစ်ဦးနှင့် မက္ကဆီကို နိုင်ငံမှ အမျိုးသမီး တစ်ဦးတို့သည် ၎င်းတို့၏ မင်္ဂလာပွဲအား အမေရိကန်နှင့် မက္ကဆီကို နိုင်ငံ အကြားရှိ နယ်စပ်တံတား တစ်စင်းပေါ်တွင် ကျင်းပခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ်ရှိ အက်ဂါ ဖယ်လ်ကွန်နှင့် အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ်ရှိ သတို့သမီး မာရီခရုဇ်ဗော်လ် ကာရာတို့ နှစ်ဦး၏ မင်္ဂလာ ပွဲအား တက္ကဆက် ပြည်နယ် အယ်လ်ပါဆို မြို့နှင့် မက္ကဆီကို ဂျာရက်ဇ် နယ်စပ်တို့ ကြားရှိ Pasodel Norte တံတားပေါ်တွင် သြဂုတ် ၂၇ရက်က ကျင်းပခဲ့ကြောင်း EI Paso Times သတင်းဌာနက ဖော်ပြခဲ့သည်။
သတို့သမီး ဖြစ်သူ မာရီခရုဇ်သည် လွန်ခဲ့သည့် ခုနစ်နှစ်က အမေရိကန် နိုင်ငံသား ဖြစ်ကြောင်း၊ သူမ၏ အစ်မ ဖြစ်သူက နယ်စပ် လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး အာဏာပိုင် များအား လိမ်ညာပြောဆို ခဲ့မှုကြောင့် သူမအား အမေရိကန် နိုင်ငံ အတွင်းသို့ ၀င်ရောက်ခွင့်ကို အမေရိကန် အစိုးရက တားမြစ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
အမေရိကန်၏ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် နောက်ပိုင်း ဥပဒေ အရ နိုင်ငံခြားသားများ အနေဖြင့် နိုင်ငံသား ဖြစ်ကြောင်း၊ မှားယွင်းကြေညာ ခဲ့ပါက အမေရိကန် နိုင်ငံသို့ ၀င်ရောက်ခွင့်ကို ပိတ်ပင် ခံရမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယခုကဲ့သို့ နယ်စပ် တံတားတွင် လက်ထပ်ပွဲ ကျင်းပရသည့် အကြောင်းအရင်းမှာ ရေမြေခြားပြီး ချစ်ကြသော ချစ်သူနှစ်ဦး အတွက် အမေရိကန်၏ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး ဥပဒေကြောင့် အခက် ကြုံရသည်ကို ပြသလို၍ ဖြစ်ကြောင်း၊ တစ်ပြည်သူ အတွက် အခက် ကြုံစေရုံသာ မက တစ်ပြည်သူကို ချစ်မိသည့် မိမိအတွက်လည်း ဒုက္ခရောက်ကြောင်း သတို့သား ဖြစ်သူက ပြောကြားခဲ့သည်။
ရန်ကုန်လေဆိပ်နှင့် မြို့တွင်း အငှားကား ၀န်ဆောင်မှု အမေရိကန် ကုမ္ပဏီ စတင်မည်
Posted by drmyochit Saturday, August 31, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
ရန်ကုန်- ရန်ကုန်အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှ မြို့တွင်းသို့ပုံ မှန်ပြေးဆွဲပေးမည့် အငှားကား ၀န်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းကို အမေရိကန်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးက စက်တင်ဘာ ၁ ရက်တွင်စတင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
“လေယာဉ်တစ်စီးဆိုက်တိုင်း တစ်ခေါက်ထွက်မယ်။ လူနှစ်ယောက်၊ သုံးယောက်နဲ့လည်း ထွက်ပေးမယ်။ နိုင်ငံခြားသားကို ငါးဒေါ်လာ။ Local (နိုင်ငံသား)ကို ကျပ်၃"၅၀၀ သတ်မှတ်ထားတယ်”ဟု Yangon Ariport Shuttle ကုမ္ပဏီအကြီးအကဲ ဦးကျော်ကျော်က ပြောကြားသည်။
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှ ဆူးလေနှင့်ပန်းဆိုး တန်းအထိပြေးဆွဲပေးမည်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံခြားသားများအတွက် ဟိုတယ်အရောက်ပို့ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ကာ ပြည်တွင်းခရီးသွားများအတွက်မူ လေဆိပ်မှအင်းစိန်လမ်း၊ အင်းလျားလမ်းနှင့် ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းတစ်လျှောက်ရှိ အနီးဆုံးနေရာများတွင် ချထားပေးမည်ဟု ဦးကျော်ကျော်ကပြောသည်။
Yangon Ariport Shuttle ကုမ္ပဏီသည် အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူရ ဦးရွှေမန်းတို့နှင့် တွေ့ဆုံစဉ်အဆို ပါလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍တင်ပြခဲ့၍ နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတို့က လာရောက်လုပ်ကိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
လက်ရှိတွင် Yangon Ariport Shuttle ကုမ္ပဏီသည် ၀ှီးချဲ ပါတင်ဆောင်နိုင်သောကားအပါအ၀င် ကားခြောက်စီးဖြင့်လုပ်ငန်း စတင်မည်ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။
ကမ္ဘာဦး သက်ရှိများအစ မားစ်ဂြိုဟ်မှ ဖြစ်နိုင်ဟုဆို
နေစကြာဝဠာ အတွင်း သက်ရှိများ ပထမဆုံး ပေါက်ဖွားလာသည့် ဘူမိနက်သန် နေရာသည် ကမ္ဘာမြေ မဟုတ်ဘဲ မားဂြိုဟ်သာ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း သိပ္ပံပညာရှင် တစ်ဦးက ကောက်ချက်ချ ပြောဆိုခဲ့သည်။ ယနေ့ နေစကြာဝဠာ အဖွဲ့အစည်းအတွင်း သက်ရှိများ မှီတင်းနေထိုင်နိုင်သည့် တစ်ခုတည်းသော နေရာသည် ကမ္ဘာဂြိုဟ်ဟု သတ်မှတ်ထားသော်လည်း ကမ္ဘာပေါ်ရှိ သက်ရှိဇီဝဓာတ်၏ မူလအစသည် ဂြိုဟ်နီကြီးဟု တင်စားခေါ်ဝေါ်ခြင်း ခံရသည့် မားစ်တွင် ဖြစ်နိုင်ကြောင်း သုတေသန ရလဒ်သစ် တစ်ခုကို အထင်ကရ သိပ္ပံကွန်ဖရင့် တစ်ခုတွင် တင်သွင်းလာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ယခုကောက်ချက်သည် သက်ရှိဇီဝဓာတ် အစပြုရန် လိုအပ်သည့် အစောဆုံး မော်လီကျူး ဖွဲ့စည်းမှု စံနမူနာ ပုံစံများကို အခြေခံ တွက်ချက်ကာ ဖော်ထုတ်လာခြင်းဟု သိရှိရသည်။
အီတလီနိုင်ငံ၊ ဖလောရင့်စ်မြို့တွင် ပြုလုပ်ကျင်းပသည့် ဂိုးလ်ရှမစ်ဒ် သိပ္ပံကွန်ဖရင့်တွင် သက်သေ အထောက် အထား များကို အခြေခံ ထုတ်နုတ်သည့် ယခုတွေ့ရှိမှု အသစ်ကို ပရော်ဖက်ဆာ စတီဗန်ဘန်နာက တင်သွင်းလာခြင်း ဖြစ်သည်။ သက်ရှိမော်လီကျူး ဖွဲ့စည်းမှု အပိုင်းအခြား (၃)မျိုးဖြစ်သည့် RNA၊ DNAနှင့် ပရိုတိန်းတို့၏ ဖြစ်တည်မှု သီအိုရီများကို အခြေခံကာ မားစ်ဂြိုဟ်ပေါ်တွင် သက်ရှိများ ရှေးကနဦး ကာလများက ရှင်သန် ပေါက်ဖွားခဲ့ကြောင်း ပရော်ဖက်ဆာ ဘန်နာက ပြောကြားသွားသည်။ ၎င်းက ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင် ပထမဆုံး သက်ရှိ ဇီဝဓာတ်များ စတင်ဖြစ်တည်လာသည့် အချိန်ထက် နှစ်ပေါင်း သန်း(၃၀၀၀)မျှစောကာ မားစ်တွင် သက်ရှိရပ်ဝန်းတစ်ခု ဖြစ်တည်ခဲ့ကြောင်း ယုံကြည်နေသည်။
ဂြိုဟ်နီကြီးတွင် သက်ရှိဖြစ်တည်မှု စတင်ခဲ့ကြောင်း အယူအဆသည် အငြင်းပွားဖွယ် ဖြစ်နေသော်လည်း ပရော်ဖက်ဆာ ဘန်နာ၏ သီအိုရီကို ထောက်ခံသူများလည်း ရှိနေခဲ့သည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ဂီနက်စ်ဗီးလ်ရှိ ဝက်စ်သီမာ သိပ္ပံဌာနမှ ပညာရှင်ကြီးကမူ မိမိ၏ အယူအဆသည် လက်တွေ့နှင့် နီးစပ်မည်ဟု ယုံကြည်နေ သည်။ လတ်တလောတွင် မားစ်ဂြိုဟ်ပေါ် ဆင်းသက်ထားသည့် Curiosity ဂြိုဟ်ဆင်းယာဉ်မှ ပြန်လည်ပေး ပို့နေသော အချက်အလက်များက မားစ်မျက်နှာပြင်တွင် သက်ရှိများ လုံးဝ ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်မှု မရှိကြောင်း ညွှန်ပြ လျှက်ရှိသည်။ သို့သော်လည်း တစ်ချိန်က မားစ်ဂြိုဟ်ပေါ်တွင် ရေဖွဲ့စည်းမှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း ယုံကြည်နိုင်လောက် သည့် အထောက်အထား အချို့ကလည်း ပရော်ဖက်ဆာ ဘန်နာ၏ စိတ်ကူး စိတ်သန်းကို အထောက်အကူ ပြုနေသည်။
ပရော်ဖက်ဆာ ဘန်နာက "Molybdenum သတ္တု ဓာတ်ဆားတွေဟာ အောက်စီဂျင် ဓာတ်ပြုမှု မြင့်မားလာတဲ့အခါ ရှေးဦး သက်ရှိတွေ ပေါက်ဖွားဖြစ်တည်မှုကို လွှမ်းမိုး သက်ရောက်လာနိုင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ အစောဆုံး နေ့ရက်တွေတုန်းက ဒီသက်ရောက်မှု လုံးဝ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေ မရှိဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အရမ်းရှေးကျနုနယ်တဲ့ သက်တမ်းတုန်းက ကမ္ဘာပေါ်မှာ အောက်စီဂျင် နည်းနည်းပဲ ရှိသေးတယ်။ အဲဒီအချိန် မားစ်ဂြိုဟ်ပေါ်မှာ အောက်စီဂျင်ဓာတ် အများကြီး ဖြစ်နေပြီ"ဟု ရှင်းပြခဲ့သည်။ ၎င်းက ထိုအချိန်က မားစ်ဂြိုဟ်၏ ပတ်ဝန်းကျင်သည် ယနေ့ထက်ပင် ပိုမို ခြောက်သွေ့နိုင်ကြောင်းလည်း ဆိုသည်။
ပရော်ဖက်ဆာ ဘန်နာက "မားစ်ဟာ ကမ္ဘာထက် ပိုပြီးတော့ အောက်စီဂျင် ဓာတ်ပြုဝါးမြိုမှု ပိုများခဲ့ပါတယ်။ ပိုလည်းခြောက်သွေ့တယ်။ ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာ အဆင်မပြေတဲ့ ဓာတုပေါင်းစပ်မှုတွေက အဲဒီအချိန် မားစ်ဂြိုဟ်ပေါ်မှာ အလုပ်ဖြစ်နေခဲ့ပုံရတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင် တကယ်တမ်းမှာ ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေဟာ မားစ်ဂြိုဟ်ရဲ့ ဆက်ခံသူတွေတောင် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မားစ်မှာ သက်ရှိတွေ စတင်ပေါက်ဖွားလာတယ်။ ပြီးတော့မှ အဲဒီက ပြိုကွဲထွက်လာတဲ့ အစိတ်အပိုင်းမျိုးမှာ ကပ်ငြိလာတဲ့ သက်ရှိဇီဝဓာတ်က ကမ္ဘာမြေပေါ် ရောက်လာခဲ့တာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်"ဟုလည်း မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
ဆက်လက်၍ ပရော်ဖက်ဆာ ဘန်နာက "ကျွန်တော်တို့ ကမ္ဘာမြေမှာ ရှိနေတာ၊ သက်ရှိတွေရဲ့ အဆုံးသတ် ရပ်တည်တဲ့ နေရာဟာ ကမ္ဘာမြေ ဖြစ်လာတာ ကံကောင်းပါတယ်။ တကယ်တမ်းက ဇီဝဓာတ် ဖြစ်တည်ပြီးတဲ့နောက် ရှည်ကြာအောင် ဆက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ အတွက်ကျတော့ ကမ္ဘာက မားစ်ထက် အများကြီး ပိုကောင်းမွန်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မျိုး ဖွဲ့စည်းထားတာပါ။ ခုချိန်မှာ မားစ်ဟာ ဘာသက်ရှိမှ မရှင်သန်တဲ့ နေရာတစ်ခုလို့ ယူဆထားကြပါပြီ။ တကယ်လို့များ ကျွန်တော်တို့ ယူဆထားတဲ့အတိုင်း သက်ရှိဇီဝဖြစ်တည်မှုရဲ့ ဘိုးဘေး အဦးအစ အထောက်အထားတွေကို မားစ်ဂြိုဟ်မှာ တွေ့ရှိလာမယ် ဆိုရင်တော့ နောက်ထပ် စကားများများ ပြောနေစရာ မလိုလောက်တော့ဘူးပေါ့"ဟုလည်း ပြောကြားသည်။
နေကို ဗဟိုပြု လှည့်ပတ်နေသော ဂြိုဟ်များအနက် စတုတ္ထမြောက် ဂြိုဟ်ပတ်လမ်းတွင် ရှိနေသည့် မားစ်သည် နေအဖွဲ့အစည်းအတွင်း ဒုတိယ အသေးဆုံး ဂြိုဟ်လည်းဖြစ်သည်။ ဂြိုဟ်တွင် သတ္တုများ၊ ကျောက်များဖြင့်သာ ဖွဲ့စည်းထားပြီး သံအောက်ဆိုက်ဒ်ဓာတ် လွန်ကဲပျံ့နှံ့နေသည့် အခြေအနေကြောင့် မျက်နှာပြင်သည် နီမြန်းသော အရောင်မျိုး ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း သိရှိရသည်။
Sony မှ လက်ရှိတွင် ရောင်းအားကောင်းခဲ့သော Xperia Z စမတ်ဖုန်းအပြင် အရွယ်အစား ကြီးမားသော Xperia Z Ultra စမတ်ဖုန်းကိုပါ ထုတ်လုပ်ထားပြီး Samsung ထုတ်ကုန်များကို ယှဉ်ပြိုင်သွားရန် ကြိုးပမ်းလျက် ရှိနေရာ ယခုနှစ် အတွင်းမှာပင် နောက်ထပ် အဆင့်မြင့် စမတ်ဖုန်း တစ်လုံးဖြစ်သော Honami ဟု ခေါ်ဆိုထားသည့် Xperia Z1 ကို ထုတ်လုပ် ကြေညာသွားရန် ရှိနေသည်။
Sony ၏ နောက်ပိုင်းထုတ်ကုန် အများစုမှာ ရေစိုခံ အကြမ်းခံ အမျိုးအစားများ ဖြစ်လာသည့် အတွက် ယခုဆက်လက် ထုတ်လုပ်မည့် Xperia Z1 စမတ်ဖုန်းမှာလည်း ရေစိုခံ၊ အကြမ်းခံ အမျိုးအစားဖြစ်ကြောင်း Sony ကပင် အတည်ပြု သွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ Xperia Z1 ဖုန်းမှာ လက်ရှိနောက်ဆုံး ထုတ်လုပ်ထားသော Xperia Z Ultra ဖုန်းကဲ့သို့ အပါးဆုံး အနေအထား မဟုတ်သော်လည်း ပါးလွှာသည့် အတန်းအစားများထဲတွင် ပါဝင်မည် ဖြစ်ကြောင်း နောက်ပိုင်း ထွက်ပေါ်လာသော အဆိုပါ ဖုန်း၏ ပုံများကို ကြည့်ကာ ခန့်မှန်းပေးထားကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ဖုန်းအပေါ်ပိုင်းတွင် 3.5mm headset jack ပါရှိပြီး ဖုန်းညာဘက်ဘေးတွင်မူ power, button, volume rocker တို့ ပါဝင်မည် ဖြစ်သည်။ ကင်မရာပိုင်းအတွက် Omio က တွေ့ရှိသည့် ပုံများအရ ရုပ်ထွက် အထူးကောင်းမွန်သည့် G lens အမျိုးအစားကို သုံးထားသည်ဟု သိရှိရသည်။ ထပ်မံထွက်ပေါ်လာသော ပုံများအရ ဆိုလျှင် Xperia Z1 မှာ အဖြူ၊ အနက်အပြင် အပြာရောင်ကို ပါရှိမည်ဟု သိရှိရပြီး အတိအကျကိုမူ ပြောဆိုထားခြင်း မရှိသေးပေ။ 5-inch Full HD display, quad-core Snapdragon 800 processor, 2GB RAM, 3000 mAh battery နှင့် Android 4.3 Jelly Bean ကို အသုံးပြုပေးထားမည် ဖြစ်သည်။ Sony မှာ အဆိုပါ ဖုန်းသစ်ကို လာမည့် စက်တင်ဘာလ ၄ ရက်တွင် အသေးစိတ် အချက်အလက်များနှင့်အတူ တရားဝင် ကြေညာ ပေးသွားရန်ပါ ရှိနေသည်။
Sony မှာ Xperia Z1 ဖုန်း၏ mini အမျိုးအစား ဖြစ်သော Xperia iA Honami ကိုပါ ထုတ်လုပ်သွားရန် ရှိနေပြီး 4.3-inch display, Snapdragon processor, 2GB RAM, 16GB internal storage with SD card slot, 2400 mAh battery တို့ကို ထည့်သွင်း ပေးထားသည်ဟု သိရှိရသည်။
ကျောက်ကပ်ဆိုသည်မှာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် မရှိမဖြစ်ကလီစာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ အဓိက အားဖြင့်သွေး ကိုဆေးကြော သန့် စင်ပေးသော လုပ် ငန်းအား လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ ရေ နှင့် သတ္တု ဓာတ်ပ မာဏတို့ ကို ထိန်းညှိပေးကာ၊ ပိုလျှံထွက်ရှိလာသော အရည်များ အား ဆီးအိမ်၊ ဆီး ပို့ ပြွန်မှ တဆင့် ဆီးအဖြစ်ထွက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အရွယ်ရောက်သူ တစ်ဦး၏ နေ့ စဉ်ရေသောက်နှုန်း သည် ပျမ်းမျှ ၁-လီတာမျှ သောက်သုံး သင့်ပြီး၊ ဆီးသွားမှု ပမာဏသည် အနဲဆုံး လီတာဝက်ခန့် မှ ၁-
ထိုအကြောင်း(၃)ရပ် ကြောင့် ဆီးအရောင် ၂၄နာရီခန့် ကြာပြောင်းလဲခြင်း သည်ပြသနာမရှိလှသော်လည်း၊ ကျန်းမာရေးတစ်စုံတစ်ရာချို့ ယွင်းမှုကြောင့် *ဆီးအ *ရောင်သိသိသာသာပြောင်းလဲတတ်ပေရာ၊ မိမိကျန်းမာရေး အခြေအနေကို အောက်ပါအကြောင်းအရာတြို့ဖင့် သုံးသပ်နိုင် ပါသည်။
(၄) ဆီးလမ်းကြောင်း ပိုးဝင်ခြင်းကြောင့်၊ သွေးဖြူ/နီဥ ဆဲလ်များထဲတွင် ဘက်တီးရီး ယားများတိုးပွား လာကြကာ ဆီး အရောင်သည် နို့ ကဲ့ သို့ြ ဖူသွား တတ်သည်။ ကျောက်ကပ်ကျောက်တည်းခြင်းကလည်း
(၅) အနီရောင် (သို့ ) ပန်းရောင်ဆီးသွားခြင်းကို ဆီးထဲတွင်သွေးပါသည်ဟု ထင်မှတ် မှားလေ့ ရှိကြ သည်။ အနီရောင်သကြားမုန်လာ နှင့် ဘယ်ရီသီး အနီရောင်များ စားခြင်းဖြင့် ဆီးနီစေသလို၊ anti-psychotics ဓာတ်ပါရှိသောဆေးဝါးအချို့ သောက်သုံးခြင်းက လည်း ဆီးနီစေ ၏။ အကယ်၍ သင့်ခနာကိုယ် ထဲတွင် ခဲဆိပ် တက်လျှင် ဆီးနီရဲစေ သဖြင့် အထူးဂရုစိုက်ပါ။
(၆) ဘီယာသောက်ခြင်းနှင့်ကယ်ရိုတင်းဓာတ်ပါသော မုန်လာဥနီအမြောက် အများစားသုံးခြင်းဖြင့် ဆီး လိမ္မော်ရောင်သွားစေသည်။ ဗီတာ မင်စီအလွန်အကျွံ သောက်သုံးခြင်း၊ ခီမိုဆေးသွင်းကုသခြင်း နှင့်
ပိုးသတ်ဆေး အချို့ ကလည်း ဆီးကိုလိမ္မော်ရောင် ဖြစ်စေတတ်သည်။
သင့်ဆီး သည်လိမ္မော်ရောင်ဖြစ်ပြီး၊ ၀မ်းအဖြူရောင်သွားနေပါက အသည်းရောင်အသားဝါလက္ခဏာ ဖြစ်သည်။ လိုအပ်သောပမဏထက် ဗီတာမင်စီ မှီဝဲခြင်းကကျောက်ကပ်ကိုပျက်စီးစေသည်။
(၁၀) ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြောဂါ ရှိသူ၏ ဆီးသည် မာပယ်လ်ပန်းရနံ ထွက်လေ့ ရှိပြီး၊ ဆီးချိုရောဂါဝေဒနာ သည်၏ ဆီး သည် အချို့ နံ့ထွက်သဖြင့်မိမိကိုယ် ကို စမ်းစစ်ပါ။
ကျောက်ကပ်ပျက်စီးစေသော အဆိုးရွားဆုံးအစား အစာများမှာ ပူစပ်သော အစားအစာများ၊ရေခဲရေ၊ အနီရောင်အသား၊ ဆား၊ ငရုပ် ကောင်း၊ ထညင်း သီး၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲထားသောအရန် သင့် သစ်သီးဖျော် ရည်၊ ပြုပြင်ပြောင်း လဲထားသော ဓာတုအချိုသွားရည်စာအမျိုးမျိုး နှင့် အချိုမှုန့် ၊ ဆို ဒါ နှင့် အဖျော် ယမကာများ၊ အထူး သဖြင့်တရုပ်ပြည်ထုတ် နို့ ထွက်ပစ္စည်း အမျိုးမျိုး၊ ကဖိန်းဓာတ်လွန်ကဲ သော ကော်ဖီ၊လ္ဘက်ရည် တို့ ဖြစ်သည်။အနီရောင်ငရုပ်ပွ၊ ဂေါ်ဖီထုပ်၊ ပန်းဂေါ်ဖီ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ကြက်သွန်နီ၊ ပန်းသီး၊ ကျောက် ဖရုံ သီး၊ ဖရဲသီး၊ စတော်ဘယ်ရီ အပါအ၀င် ဘယ်ရီသီးအမျိုးမျိုး၊ ချယ်ရီး သီး၊ အနီရောင်စပျစ်သီး၊ ကြက် ဥအဖြူရောင်၊ အိုမီဂါ ၃ဖက်ဆီးအက် ဆစ်ကြွယ် ၀သော ငါး၊ သံလွင်ဆီ၊ မြင်းခွာရွက် တို့ သည် ကျောက် ကပ်ကျန်း မာရေးအတွက် အကောင်းဆုံးအစားအစာများဖြစ်သည်။ ထို့ ပြင် ဆီသွားသည့် အခါဆီး ကုန်သည် အထိ စိတ်ရှည်ရှည်စွန့် ထုတ်ရန်လိုအပ်ပြီး၊ ဆီးကျန်ခြင်းကြောင့် မလိုလား အပ်သောနောက် ဆက်တွဲ ရောဂါ များ မဖြစ်စေရန် ကြက်သွန်ဖြူပြုတ်ရည်ကို ဆေးမြီးတိုအဖြစ်သောက်သုံးနိုင်ပါကြောင်း။* *
မြေယာအငြင်းပွားမှုကို တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းခြင်းဖြင့် ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ကြ
ကွတ်ခိုင်၊ သြဂုတ် ၃၁။
ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်၊ နမ့်ပါချီးကျေးရွာသားများနှင့် ကျောက်ထုတ်လုပ်ငန်းကန်ထရိုက် ဦးမောင်မောင် သွင်နှင့် နမ့်ပါချီး(ဗမာရွာ)တွင် နေထိုင်လျှက်ရှိသော ကျေးရွာသားအချို့သည်
မြေယာ ပိုင် ဆိုင်မှု အငြင်းပွားကြရာ အားလုံးတွေ့ဆုံ ညှိနှိုင်းကြရာ အဆင်ပြေသွားကြောင်း ယင်းဆွေးနွေး ပွဲမှ သိရသည်။
နမ့်ပါချီးကျေးရွာ ထွေအုပ်စာရေး၊ မန်ပြိန်း မစိုးရိမ်ကျောင်းတိုက် ဆရာတော်၊ ရပ်မိရပ်ဖများနှင့် မီဒီယာအချို့၏ အရှေ့တွင် ရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ရာ ဦးမောင်မောင်သွင်မှ အမှုအား ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏နယ်နိမိတ် အတွင်း ပါဝင်နေသော ရွာသားများ၏ မြေနေရာအား အတိအကျ ပြန်ပေးမည်၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် တတ်စွမ်းသမျှ ဆောင်ရွက်ပေးမည်။ ယခင် ဖြစ်ခဲ့သောကိစ္စအား အငြိုးအာဃာတ မထားဘဲ ရွာသားများနှင့် စည်းလုံးညီညွတ်စွာ နေထိုင်သွားမည်ဟူသည့် အချက်လေးချက်အား သဘောတူ လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့သဖြင့် ပြေလည်မှုရရှိသွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
“ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ (၂၄)နှစ်ကတည်းက နေထိုင်လာတာမှာ မနှစ်ကစပြီး ဦးမောင်မောင်သွင် က စားသောက်ဆိုင်ဖွင့်ဖို့ ဌာနဆိုင်ရာက သူ့ကိုမြေနေရာချထားပေးတယ်။ မင်းတို့အကွက်တွေ မလွတ်ဘူး။ ဖယ်ပေး၊ မဖယ်ပေးရင် ငါ့အကြောင်းသိမယ် ဆိုပြီး ခြိမ်းခြောက်တာပါ။ ပြီးတော့ သူက ပြောင်းပြန်ပြန်ပြီး တရားစွဲတာကို ခံနေရပါတယ်” ဟု ကျေးရွာလူကြီး ဦးတင်ထွန်းမှ ပြောသည်။
အဆိုပါကျေးရွာမှာ ဆောက်လုပ် ရေးခေတ်ကတည်းက တည်ရှိနေခြင်းဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်းရွာသားဦးရေ (၁၇၄)ဦးခန့် စုစုပေါင်းရွာသားဦးရေ (၁၇၄)ဦး ခန့် နေထိုင်လျှက်ရှိကာ ကျောက်၊ ဗြုံးများ တနိုင်တပိုင် တူးဖော်ခြင်းဖြင့် အသက်မွေးလျှက် ရှိနေကြောင်း သိရှိရသည်။
ယခုအခါတွင် ဦးမောင်မောင်သွင်မှ အမှုဖြစ်ပြီး ရုံးချိန်းခေါ်သည့် နေ့မှစ၍ ကျေးရွာသား အချို့အား ဆန်ဝေခြင်း၊ ငွေသားထောက်ပံ့ခြင်းများ ပြုလုပ်လျှက်ရှိကာ ဒေသခံရွာသားအချို့အား မိမိဘက်
ပါလာအောင်နှင့် ၄င်းအားထောက်ခံအားပေးရန် စည်းရုံးလျှက်ရှိကြောင်း ကျေးရွာသားများက ပြောခဲ့ကြသည်။
“အရင်က တစ်ခါမှ မဝေပေးဖူးပါဘူး။ အမှုဖြစ်မှပဲ ရွာသားအချို့ သူ့ကို ထောက်ခံအောင်လို့ ဒီလိုလာဝေ နေတာ။ ဝေတဲ့နေ့ကလည်း ရုံးချိန်းရှိတဲ့နေ့မှာပဲ လာဝေတာဖြစ်ပါတယ်”ဟု နမ့်ပါချီးကျေးရွာစာရေးက ပြောသည်။
ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ဦးမောင်မောင်သွင်အား မေးမြန်းရာတွင် ရွာသားများမှ ၎င်းအား ခြိမ်းခြောက်သဖြင့် တရားစွဲရခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ၄င်းပိုင်ဆိုင်သည့် အကွက်မှာ ဌာနဆိုင်ရာသ်ို့ လျှောက်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း ယခုဆန် ဝေသည် ဆိုသည်မှာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အနေဖြင့် ထောက်ပံ့ပေးခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။
“ကျွန်တော်က ဒီရွာကောင်းကျိုးအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးတာပါ။ ကျေးရွာလူကြီးအချို့က ကျေးရွာပိုင်မြေ တွေကို ရောင်းစားပြီး ကျေးရွာလူထု ကောင်းကျိုးဘာမှ ဆောင်ရွက်တာ မရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်က အခု ကရုဏာရှင် ဆိုတဲ့ အသင်းလေးဖွဲ့ပြီး ဒီအသင်းကိုဝင်တဲ့ ကျေးရွာသားတိုင်းကို ဆန်တစ်လကို (၅)ပြည်၊ ငွေ(၅၀၀၀ိ/-)ကျပ် ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ နောင်ကိုလည်း ကျေးရွာအတွက် ဆက်ပြီးတော့
လှူဒါန်းဦးမှာပါ။ ကျေးရွာစာကြည့်တိုက် ဆောက်တုန်းကလည်း (၂၀၀၀၀၀ိ/-)ကျပ် လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်” ဟု ဦးမောင်မောင်သွင်က ပြောသည်။
လက်ရှိတွင် အဆိုပါနေရာအား ယနေ့အချိန်ထိ ပုံစံ(၁၀၅) ချပေးခြင်း၊ ဂရံလျှောက်ထားခွင့် ချပေးခြင်း မရှိသေးကြောင်း၊ နမ့်ပါ ချီးကျေးရွာ ထွေအုပ်စာရေးမှ ပြောသည်။
ဆီးရီးယားဓာတုလက်နက်စုံစမ်းမှုပြီးစီး၊ ကုလသမဂ္ဂကျွမ်းကျင်သူများ လက်ဘနွန်သို့ ဆက်လက်စုံစမ်း
ချက်တူရာ၊ လက်ဘနွန်၊ သြဂုတ် ၃၁။
ဒမတ်စကတ်စ်အနီး ဓာတုလက်နက်များသုံးစွဲခဲ့ကြောင်း သံသယရှိသည့် တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကို စုံစမ်းမှုပြီးဆုံးပြီးနောက် ကုလသမဂ္ဂစုံစမ်းရေးအဖွဲ့သည် ဆီးရီးယားမှ နယ်စပ်ကိုဖြတ်ကာ လက်ဘနွန်သို့ ယနေ့ဝင်ရောက်သွားကြကြောင်း သိရသည်။
ကုလသမဂ္ဂစုံစမ်းရေးအဖွဲ့သည် လက်ဘနွန်လုံခြုံရေးတပ်ခြံရံကာ နယ်စပ်မှတဆင့် လက်ဘနွန်နိုင်ငံတွင်းသို့ ဝင်ရောက်သွားကြပြီး ၎င်းအဖွဲ့တွင် စုံစမ်းရေးအရာရှိ ၁၃ ဦးပါဝင်ကာ ဆီးရီးယားအစိုးရက ပြည်သူများအား ဓာတုလက်နက်များသုံးတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းစွပ်စွဲမှုကို စုံစမ်းခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
ကုလသမဂ္ဂလက်နက်ဖယ်ရှားရေးသံတမန် အန်ဂျလာကိန်းသည် ကုလသမဂ္ဂကျွမ်းကျင်သူများနှင့်ဆီးရီးယားသို့ လိုက်ပါခဲ့ပြီး ယနေ့တွင် ဖြစ်စဉ်ကို အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးထံ အစီရင်ခံမည်ဖြစ်သည်။
ကုလသမဂ္ဂစုံစမ်းရေးအဖွဲ့သည် ဆီးရီးယားပြည်တွင်းစစ်တွင် ဓာတုလက်နက်သုံးစွဲ/မစွဲကို မြန်ဆန်စွာ အစီရင်ခံစာတင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂပြောရေးဆိုခွင့်ရပုဂ္ဂိုလမာတင်နက်ဆာကီက ပြောကြားသည်။
“အဖွဲ့ဟာ သက်သေတွေ၊နမူနာတွေစုဆောင်းတာလုပ်ပြီးသွားပါပြီ” ဟု နက်ဆာကီက သတင်းထောက်များကို ပြောကြားပြီး ကျွမ်းကျင်သူများရေးသားသည့် အဆုံးသတ်အစီရင်ခံစာကို ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတိုင်းသို့ ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။
ကုလသမဂ္ဂကျွမ်းကျင်သူများ လက်ဘနွန်သို့ ဆက်လက် ထွက်ခွာမှုသည် ဆီးရီးယားအစိုးရကို နိုင်ငံတကာမှ ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ဖွယ် မျှော်လင့်ချက်များကို မြင့်မားလာစေသည်။
အမေရိကန်သမ္မတက ဆီးရီးယားနှင့်ပတ်သက်၍ ကန့်သတ်ပြီး ကျဉ်းမြောင်းသော လုပ်ဆောင်ချက်များ ချိန်ဆနေကြောင်း ကမ္ဘာကြီးအနေနှင့်လည်း ဓာတ်ငွေ့ဖြင့် တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးများရာပေါင်းများစွာ သေဆုံးခဲ့ရခြင်းအတွက်လည်း တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်ရှိကြောင်း တိုက်တွန်းပြောကြားသည်။
ဆီးရီးယားအစိုးရအား စစ်တိုက်ရန် အဆုံးသတ်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးကြောင်း ပြောကြားသော်လည်း တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်လာမည်ဟု အိုဘားမားက ပြောကြားထားသည်။
ပြင်သစ်သမ္မတဖရန်ဆွာ ဟော်လန်ဒီက ဆီးရီးယားကို စစ်ထိုးခြင်းသည် ဗုဒ္ဒဟုးနေ့တွင် ဖြစ်နိုင်ကြောင်းနှင့် ဗြိတိန် ရုတ်တရက်မပါဝင်တော့ခြင်းသည် ပြင်သစ်အစိုးရ၏ ရပ်တည်ချက်ကို သက်ရောက်မည် မဟုတ်ကြောင်းလည်း ပြောကြားသည်။
“ပြင်သစ်ဟာ ဆီးရီးယားအစိုးရကို ခိုင်မာပြီးသင့်တော်တဲ့လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုလုပ်ချင်ပါတယ်” ဟု ပြင်သစ်သမ္မတဖရန်ဆွာက အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင် ပြောကြားသည်။
ဝါရှင်တန်အစိုးရက ကလေးများ အပါအဝင် လူပေါင်း ၁၄၂၉ ဦးသည် လွန်ခဲ့သည့် ရက်သတ္တပတ်အတွင်း ဆီးရီးယားအစိုးရ၏ ဓာတုလက်နက်တိုက်ခိုက်မှုတွင် သေဆုံးခဲ့ရကြောင်း ပြောကြားသည်။
ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုရိုက်ကူးမှုကြောင့် ကင်မ်ဂျုံအန်း၏ချစ်သူဟောင်း သေဒဏ်ချမှတ်ခံရ
မြောက်ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင် ကင်မ်ဂျုံအန်း၏ ချစ်သူဟောင်းမှာ ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုတစ်ခု ထွက်ပေါ် လာ သည့်နောက် သုတ်သင်ရေး တပ်ဖွဲ့၏ သေနတ်နှင့် ပစ်ခတ် သေဒဏ်ပေးခြင်းကို ခံခဲ့ရကြောင်း သတင်း များက ဖော်ပြခဲ့သည်။ အဆိုတော် တစ်ဦးဖြစ်သည့် ဟွမ်ဆွန်ဝူလ်ကို အများရှေ့မှောက်တွင် သေနတ်နှင့် ပစ်သတ်သော မြင်ကွင်းကို သူမ၏ မိသားစုကိုလည်း ကြည့်ရှုနေရန် မြောက်ကိုရီးယား အာဏာပိုင် များက စေခိုင်းခဲ့ကြောင်းလည်း အဆိုပါ သတင်းများက ဆိုသည်။ သူမကို ဖမ်းဆီးပြီး (၃)ရက် အကြာ တွင်ပင် သေဒဏ်ပေးလိုက်ခြင်းဟုလည်း သိရှိရသည်။ သူမသည် Sex Tapeတစ်ခု ထွက်ပေါ် လာ သည့်နောက် ကင်မ်၏ အမျက်ဒေါသနှင့် ရင်ဆိုင်ရပြီး စက်သေနတ်များဖြင့် ပစ်သတ်ရန် စီရင်ချက် ချမှတ်ခံခဲ့ ရခြင်းဟု သိရှိရသည်။
ဟွမ်သည် ညစ်ညမ်းဗီဒီယို ရိုက်ကူးမှုဖြင့် စုရုံးသေဒဏ်ပေးခံရသည့် လူသိထင်ရှား အနုပညာရှင် (၁၂)ဦး အနက်မှ (၁)ဦးဖြစ်ကြောင်း သတင်းများက ဆိုသည်။ တောင်ကိုရီးယား သတင်းစာ ချိုဆန်အီလ် ဘိုက အဆိုပါ ကိစ္စကို စတင်၍ ဖော်ပြခဲ့ပြီး မြောက်ကိုရီးယားသည် သေဒဏ်ပေးခဲ့သည့် အနုပညာရှင် အားလုံးမှာ မိမိကိုယ် ကိုယ် ညစ်ညမ်းဗီဒီယို ရိုက်ကူးပြီး အခကြေးငွေအတွက် ရောင်းစားကြောင်း စွပ်စွဲ ချက်ဖြင့် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သုံးသပ်ရေးသားထားသည်။ အဆိုတော် အများစု ပါဝင်သည့် အနုပညာရှင် များကို ဩဂုတ်လ (၁၇)ရက်နေ့က ဖမ်းဆီးပြီး ဩဂုတ်လ (၂၀)ရက်နေ့တွင် ပစ်သတ် ခဲ့ခြင်း ဟုလည်း ချိုဆန်အီလ်ဘိုက ဖော်ပြခဲ့သည်။ ပစ်သတ်ခံရသူများ၏ ဆက်စပ် မိသားစုများကိုလည်း လူ့အဖွဲ့ အစည်းနှင့် ဆက်နွယ်သည့် ပြစ်မှုများအတွက် အားပေးအားမြှောက်မှုဖြင့် အလုပ်ကြမ်း စခန်းများသို့ ပို့ဆောင် ခဲ့ကြောင်း မြောက်ကိုရီးယား သတင်းရင်းမြစ် တစ်ခု၏ အဆိုကို ကိုးကားပြီး သတင်းစာ တွင် ရေးသားခဲ့သည်။ "
အန်ဟာဆူ အော်ကက်စထရာတီးဝိုင်း၊ ဝန်ဂျေဆင်း အလင်းရောင် ဂီတအဖွဲ့နဲ့ မိုရန်ဘွန် ဂီတအဖွဲ့က အဆိုတော်တွေ ကို စက်သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်တာပါ။ ဒါကို မိသားစုတွေက မကြည့် မနေရ စောင့်ကြည့်နေခဲ့ရပါတယ်"ဟု အဆိုပါ သတင်းရင်းမြစ်က ထုတ်ဖော် ပြောကြားခဲ့သည်။ကင်မ်နှင့် ဟွမ်တို့သည် လွန်ခဲ့သော (၁၀)နှစ်က စတင်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး လက်ထပ်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်းပင် အတည်မပြုနိုင်သည့် သတင်း များ ထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ကင်မ်၏ဖခင် အာဏာရှင်ဟောင်း ကင်မ်ဂျုံအီလ်၏ ကြားဝင် တားမြစ်မှုအတွက် ၎င်းတို့၏ ဆက်ဆံရေး ပျက်သုဉ်းခဲ့သည်။
ယခုအခါတွင် ကင်မ်သည် ရီဆိုလ်ဂျူကို တရားဝင် ဇနီးအဖြစ် လက်ထပ်ထားပြီး ဖြစ်သည်။ ကင်မ်သည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ် ဇူလိုင်လက အမျိုးသမီး တစ်ဦးနှင့်အတူ ရှိနေသည့် ဓာတ်ပုံများ ထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီး ဟွမ်နှင့် ပြန်လည် ဆက်နွယ်မှု ရှိနေကြောင်း ကောလာဟလများ ပျံ့နှံ့ခဲ့ဖူးသည်။ ကင်မ်၏ လူမှုရေး အခြေအနေသည် သိုသိပ် လျှို့ဝှက်လွန်းပြီး (၂၀၁၀)ပြည့်နှစ်က အမည်မသိ အမျိုးသမီး တစ်ဦးနှင့် သားယောက်ျားလေးတစ်ဦး ဖွားမြင်ထားကြောင်းလည်း သတင်းများက ဖော်ပြခဲ့သည်။
အမေရိကန် အကျဉ်းသားကိုလွတ်ပေးဖို့အား မြောက်ကိုရိးယားတို့ ငြင်း
မြောက်ကိုရီးယားတို့ ဖမ်းဆီးထားတဲ့ အမေရိကန်အကျဉ်းသားတစ်ဦးကို လွတ်ပေးဖို့ တောင်း ဆိုချက် ကို မြောက် ကိုရီးယား (DPRK) မှ ငြင်းဆန်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
အသက်၄၄နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့KennethBaeလုိ့အမည်ရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတစ်ဦး အဖြစ် မြောက်ကို ရီးယားသို့ သူသျှိုအဖြစ်ရောက်ရှိချိန် ဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ပြိးခဲ့တဲ့နှစ် နိုဝင်ဘာ လက ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ၁ နှစ်ပြည့်ပါတော့မယ်။ သူ့ကို DPRK
က ထောင်ဒဏ် ၁၅ နှစ်ချမှတ်ထားပါတယ်။ ယင်း ပြုမှုလုပ်ဆောင်ချက်အတွက်အမေ
ရိကန်တုိ့ မြောက်ကိုရီးယားကို ပိုမို ဒေါသထွက်စေပြီး ဆက်ဆံရေး ပိုလို့ တင်းမာစေ
တောင်ကိုရီးယားနဲ့ မြောက်ကိုရီးယား ဆက်ဆံရေး ပြေလှယ်ရန်ပြန်လည်ငြှိနှိုင်းနေ
ချိန် ယခုကဲ့သို့ ပြောဆို တုန့်ပြန်ချက်အပေါ် အမေရိကန်မှ မည်သို့အရေးယူ ပိတ်ဆို့
မှု ပြုလုပ်မယ်ဆိုတာကို စောင့်ကြည့်လျက် ရှိကြ ကြောင်း သိရပါတယ်။
MX Player Pro V1.7.19 For Android
Android ဖုန်း/Tablet တွေမှာ original ပါတဲ့ Video Player က ဗီဒီယို format အများကြီး ဖွင့်လို့မရပါဘူး ။ အခုပေးမယ့် MX Player Pro v1.7.19 ကတော့ Video format ပေါင်းစုံကိုလည်း ကြည့်နိုင်သလို ဗီဒီယိုတွေမှာစာတန်းထိုး Subtitle ထည့်သွင်းထားတယ်ဆိုရင်လည်း ဒီ Video Player လေးက subtitle စနစ်ကိုအထောက့်အပံ့ပေးနိုင်ပါသေးတယ်။ အရမ်းလန်းတဲ့ Video Player လေးပါ။ MX Player Pro v1.7.19 for Android ကို Google Play မှာ ၅ ဒေါ်လာနဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်သလို အောက်က လင့်ခ်မှာတော့ freedownload ရယူနိုင်ပါတယ်။ အောက်က link မှာရယူပါ။
MX Player Pro v1.7.19 for Android (Link 1)
MX Player Pro v1.7.19 for Android (Link 2)
ရန်ကုန် အဝေးသင်တက္ကသိုလ် နှင့် မန္တလေးအဝေးသင် တက္ကသိုလ် တို့၏ အနီးကပ်ပို့ချ သင်တန်းနှင့် အတန်းတင် စာမေးပွဲ ကျင်းပမည့် အချိန်ဇယားထုတ်ပြန်
Posted by drmyochit Saturday, August 31, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ |3comments
ရန်ကုန် အဝေးသင် တက္ကသိုလ်နှင့် မန္တလေးအဝေးသင် တက္ကသိုလ်တို့၏ အနီးကပ်ပို့ချ သင်တန်းနှင့် အတန်းတင်စာမေးပွဲ ကျင်းပမည့် အချိန်ဇယား ထုတ်ပြန်ကြေညာသည်ဟု သတင်း ရရှိသည်။ ထုတ်ပြန် ထားချက် အရ သိပ္ပံအထူးပြု သင်တန်းသား အားလုံးသည် အောက်တိုဘာလ ၃ ရက်မှ ၉ ရက်အထိ စာမေးပွဲ ဖြေဆိုရမည် ဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်စာ၊ ပထဝီဝင်၊ ဒဿနိက ဗေဒ၊ စိတ်ပညာ၊ အရှေ့တိုင်းပညာ၊ ဥပဒေ ပညာရပ် အထူးပြု သင်တန်းသားများသည် အောက်တိုဘာလ ၁၂ ရက်မှ ၂၂ ရက်ထိ အနီးကပ် သင်တန်း တက်ရောက်ရမည် ဖြစ်ပြီး အောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်မှ နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်ထိ စာမေးပွဲ ဖြေဆို ရမည် ဖြစ်သည်။ မြန်မာစာ၊ မြန်မာမှု ရသစာပေ၊ သမိုင်း၊ စီးပွားရေးပညာ၊ ပြည်သူ့ရေးရာ၊ အိမ်တွင်းစီးပွား၊ စီးပွားစီမံ စသည့် အထူး ပြု သင်တန်းသားများသည် နိုဝင်ဘာလ ၆ ရက်မှ ၁၅ ရက် အထိ အနီးကပ် သင်တန်း တက်ရောက်ရမည် ဖြစ်ပြီး နိုဝင်ဘာ ၁၈ ရက်မှ ၂၅ ရက်အထိ စာမေးပွဲ ဖြေဆို ရမည်ဟု ကြေညာ ထားသည်။
“စာမေးပွဲ အချိန်ကတော့ ပုံမှန်အတိုင်းပါပဲ။ အချိန်စာရင်း မထွက်ခင်ကတည်းက နှစ်တိုင်း ဒီအချိန် ပိုင်းလောက် ပဲ ဖြေရတာဆိုတော့ စာမေးပွဲအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်ထားပါတယ်။ အဝေးသင် စာမေးပွဲ အတွက် ကျောင်းကသင်တာအပြင် အထူးထုတ်တွေ ဖတ်ရသလို၊ နှစ်ဝက်မှာ ဖြေပြီး တင်ရတဲ့ Assigment တွေထဲကလည်း မေးတတ်တော့ ဒီအတွက်လည်း ပြင်ဆင်ထားရပါတယ်” ဟု သိပ္ပံ အထူးပြုဖြင့် အဝေးသင် တက္ကသိုလ်စာမေးပွဲဖြေဆိုမည့် ကျောင်းသားတစ်ဦးက ပြောသည်။
သင်ကြားမည့် အချိန်နှင့် စာမေးပွဲ ဖြေဆိုရမည့် ဘာသာရပ်အသေးစိတ်ကို ရန်ကုန်အဝေးသင် တက္ကသိုလ်နှင့် ရန်ကုန်အဝေးသင် တက္ကသိုလ်၏ ဌာနခွဲ အသီးသီးတို့ တွင် လည်းကောင်း၊ မန္တလေး အဝေးသင် တက္ကသိုလ် နှင့် မန္တလေးအဝေးသင် တက္ကသိုလ်ဌာနခွဲ အသီးသီးတို့တွင် ထုတ်ပြန် ကြေညာပေးသွားမည်ဟု သိရသည်။
လက်နက် ခဲယမ်းများ ကြိုတင်စုဆောင်းပြီး မသမာသူတစ်စုက အကြမ်းဖက် မှုများပြုလုပ်မည်ဟု ကြားသိရ သည့်သတင်းများအရ တိုင်းနှင့် ပြည်နယ်အသီးသီးရှိ ရပ်ကွက်နှင့် မြို့နယ်အချို့ရှိ နေအိမ်များတွင် လက်နက် ခဲယမ်းများ လျှို့ဝှက် သိမ်းဆည်းထားမှုရှိမရှိကို လုံခြုံ ရေးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက လိုက်လံ စစ်ဆေးသွား မည်ဖြစ်ကြောင်း သိ ရသည်။
ယင်းကဲ့သို့စစ်ဆေးမှုများ ကို လုံခြုံရေးဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် များနှင့်အတူ မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေး မှူးများ၊ အမာခံသ တင်းပေးများဖြင့် ဆောင်ရွက်သွား မည်ဖြစ်ပြီး တရားမဝင်လက်နက် ကိုင်ဆောင်မှု များတွေ့ ရှိပါက လက်နက်ကိုင်ဆောင်မှုဥပဒေ ဖြင့် ထိရောက်စွာအရေးယူသွား မည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ နိုင်ငံရဲ တပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်မှ အဆင့်မြင့်အ ရာရှိတစ်ဦးက ပြောသည်။
ယင်းနှင့် ပတ်သက် ၍''ကန့် ဘလူအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ရပ်မှာ စုံစမ်းတွေ့ရှိတာတွေအရ ဓား၊ ဂျင်ကလိ၊ တုတ်နဲ့ အခြားသေစေ နိုင်တဲ့လက်နက်စုဆောင်းထားမှု တွေရှိတယ်။ တခြားမြို့နယ်ဒေသ တွေမှာလဲ ဒီလိုကြိုတင်စီမံထားတာတွေမ ရှိဘူးလို့ မပြောနိုင်ဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ရမယ်။ လာ မယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်း လုပ်ဆောင် သွားမှာပါ''ဟု ပြောသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်လည်း ယင်းကဲ့သို့အကြမ်းဖက်မှုများဖြစ် ပွားနေစဉ်အချိန်တွင် လက်နက်ခဲ ယမ်းများ စုဆောင်းခြင်း မပြုရန်၊ သုံး ရက်အတွင်းပြန်အပ်ရန် စသဖြင့် ညွှန်ကြားချက်များပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ညွှန် ကြားချက် မလိုက်နာသည့်သူများ ကို တရားမဝင်လက်နက်ကိုင်ဆောင် မှုဖြင့် အရေး ယူဆောင်ရွက် ခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ် များရှိကြောင်း သိရသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ မှတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ''ကျွန်တော် တို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့ အဲဒီလို လုပ်တာ ထိရောက် မှုရှိတယ်။ အ မာခံသတင်းပေးတဲ့သူတွေနဲ့ စုံစမ်း ပြီး တစ်အိမ်ဆင်းတစ်အိမ်တက်လိုက်ရှာတာ။ မရှာခင် အရင်ကြေ ညာတယ်။ သုံးရက်အချိန်ပေး တယ်။ ပြီးတော့မှ ရှာလို့လက်နက် တွေတွေ့ရင် အရေး ယူတယ်''ဟု ပြောသည်။
ကျော်မြတ်ဇံ၊ Yangon Media Group
တည်ဆဲဥပဒေ အချို့သည် ပြည်သူများ လိုက်နာရန် ခက်ခဲသောကြောင့် အလိုအလျောက် ဥပဒေချိုးဖောက် သကဲ့သို့ ဖြစ်နေကြောင်း တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြား
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မီဒီယာများနှင့် နေပြည်တော်၌ သြဂုတ် ၃၀ ရက်က တွေ့ဆုံစဉ် (ဓာတ်ပုံ-ငြိမ်းဇော်လင်း)
တည်ဆဲဥပဒေ အချို့သည် ပြည်သူများ လိုက်နာရန် ခက်ခဲသောကြောင့် အလိုအလျောက် ဥပဒေ ချိုးဖောက် သကဲ့သို့ ဖြစ်သွားကြောင်း တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားသည်။
သြ ဂုတ် ၃၀ ရက်က နေပြည်တော်ရှိ ပြည်သူ့လွှတ်တော် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေး ချမ်း ကော်မတီရေးရာဆောင်တွင် သတင်းထောက်များနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ငြိမ်းချမ်း စွာ စီတန်းလှည့်လည်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ထိုသို့ထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
''တ ကယ်တော့ တချို့ဥပဒေတွေက လိုက်နာဖို့ ခက်တဲ့ဟာတွေဆိုတော့ အလိုလို ဥပဒေ ချိုးဖောက် ဖြစ် သွား တာပေါ့။ အဲဒါတွေကို ပြုပြင်ခြင်းအားဖြင့် လွှတ်တော်က တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးကို အထောက် အကူ ပြုနိုင်မယ်'' ဟု ပြည်သူ့လွှတ်တော် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေး ချမ်းရေး ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်က ပြောကြားသည်။
ထိုသို့ ဖြစ်နေမှုများကိုလည်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်မှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် များအနေဖြင့် လွှတ်တော်တွင်း၌ အဆိုတင်သွင်း ဆွေးနွေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
''ဆန္ဒပြမှုတွေကတော့ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတွေမှာ ရှိနေမှာပဲ။ အဲဒီတော့ အခုဟာက ဆန္ဒပြခွင့် ဥပဒေ ကို ပြန် လည် သုံးသပ်ဖို့ လိုတယ်ဆိုတာကို အန်တီတို့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေက လက်ခံ ထားပြီး သား ဖြစ်တယ်။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း အန်တီတို့ ကိုယ်စားလှယ်တွေထဲက တစ်ယောက် ကလည်း ဒီကိစ္စကို အဆိုတင်သွင်းဖို့ လုပ်ထားတယ်။ လာမယ့် အစည်းအဝေးမှာ ဒီအစီအစဉ် ပါလာမယ်လို့ ထင်ပါ တယ်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း တွေကိုက လိုအပ်ချက်တွေ ရှိနေတဲ့ အခါကျတော့ တရားမ၀င် ဆန္ဒပြမှုတွေ အဖြစ် ရောက်ရောက် သွားကြတယ်'' ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားသည်။
သြဂုတ် ၂၇ ရက်က ပုဒ်မ (၁၈) ဖျက်သိမ်းပေးရေး အတွက် ရန်ကုန်မြို့တွင် ဆန္ဒပြခဲ့ကြစဉ် (ဓာတ်ပုံ- မျိုးမြင့်အောင်)
လက်ရှိတွင် ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးခွင့်နှင့် စီတန်းလှည့်လည်ခွင့်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၁၈ ဖြင့် ထောင်ဒဏ် ကျခံ နေရသူများ ရှိနေပြီး ယင်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်ပေးရန် တောင်းဆိုမှုများ ရှိနေသည်ဟု သိရသည်။
လွှတ်တော်တွင်း ဥပဒေပြုရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အချိန်ကြာမြင့်သည် ဟု ပြောဆိုကြ သကဲ့သို့ မြန် လွန်းကြောင်း၊ နောင်ပြန်လည် ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်ရခြင်းကို မလိုလားအပ်ဟု ထင်မြင်သုံးသပ် သူများ လည်း ရှိကြောင်း၊ လွှတ်တော်မှ ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည့် ဥပဒေများသည် ပြည်သူများအပေါ် အကျိုး သက်ရောက် မှု ရှိစေရန်မှာ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းက လုပ်ဆောင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း ထည့် သွင်း ပြောကြားသည်။
ထို့အပြင် နိုင်ငံတွင်း တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု ရှိစေရေးအတွက် အုပ်ချုပ်ရေး၊ တရားစီရင်ရေး အပိုင်းသည် အဓိ ကဆောင်ရွက် ရမည်ဖြစ်ပြီး ပြည်သူများ အားလုံးကလည်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားသည်။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် သတ္တမပုံမှန် အစည်း အဝေးတွင် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်က အတည်ပြုပြီး ဥပဒေအဖြစ် ထုတ်ပြန်ကြေညာ နိုင်ခဲ့သည့် ဥပဒေ ၁၆ ခုရှိခဲ့သည်။
အစိုးရပိုင်သတင်းစာ China Daily သတင်းစာခေါင်းကြီးပိုင်း ၌ "No excuse for strikes" ခေါင်းစဉ်ဖြင့် အယ်ဒီတာ့အာဘော် ရေးသားခဲ့ရာတွင် အမေရိကန် နှင့် ၎င်း၏မဟာမိတ်များသည် တရားသူကြီး၊ ဂျူရီ အဖြစ် လုပ် ဆောင်နေကြသည့်အပြင် လက် မရွံ့သမားအဖြစ်လည်း ဆောင် ရွက်ကြ သည်ဟု ဖော်ပြ ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဆီးရီးယားအား စစ်ရေး အရ ဝင်ရောက်ကျူးကျော်ခြင်း သည် ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးကို တိုက်ရိုက် အကျိုး သက်ရောက် မှု ဖြစ်ပေါ်စေပြီး နိုင်ငံတကာဆက် ဆံရေးအုပ်ချုပ်မှုစံကိုလည်း ချိုး ဖောက်ရာရောက် လိမ့် မည် ဟု ဖော် ပြခဲ့သည်။
ဤသို့လှုပ်ရှားဆောင်ရွက် မှုများသည် ဆိုးရွားမှုကို ဖြစ်ပေါ် စေပြီး မကြုံဖူးသေးသော၊ မမျှော် မှန်းသော အကျိုး ဆက်များကို ဖြစ်ပေါ်လာစေလိမ့်မည်ဟု ဖော် ပြခဲ့သည်။ အီရတ်စစ်ပွဲမှာလည်း ကုလ သမဂ္ဂ သဘော တူညီမှု မပါ ဘဲ ထောက်လှမ်းရေးသတင်းများ ဖြင့် အဖျက်စွမ်းအားကြီးမား လျက်ရှိ သည်ဟု ဆို ကာ ဆက်ဒမ် ဟူစိန်ကို ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ ကြောင်း၊ ဂလိုဘယ်တိုင်းမ်သတင်း စာက ဝါရှင်တန် သည် ပြတ်သား သောနိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်မရှိဟု ဖော်ပြခဲ့သည်။ ထို့အပြင် စစ်ရေး အရ အလော တကြီး အလျင် အ မြန်လုပ်ဆောင်မှုမှာ စိတ်ဓာတ် ရေးရာပျက်ပြားမှုကြောင့်ဖြစ်သည် ဟုဆိုသည်။
စစ်ရေးအရ တိုက်ခိုက်ပါက ရုရှားနှင့်အီရန်တို့၏ လက်နက် များ ဆီးရီး ယားသို့ ထောက်ပံ့ ပေးနေသည်ကိုလည်း ထည့်တွက် ရန် လိုအပ်မည်ဟု ဖော်ပြခဲ့သည်။ တရုတ်အနေဖြင့် သတိကြီး စွာ ချဉ်းကပ်၍ ကုလသမဂ္ဂစစ်ဆေး ရေးမှူးများ၏အဖြေကို စောင့် နေကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။
ဆီးရီးယားနိုင်ငံရှိ တရုတ် များ ထွက်ခွာကြရန် တရုတ်နိုင်ငံ ခြားရေးဌာနက သတိပေးထား သည်။ တရုတ် က နိုင်ငံတကာဝင် ရောက်စွက်ဖက်မှုကိုလည်း ဆန့် ကျင်သည်ဟု ဖော်ပြခဲ့သည်။
ဒေါ်စိုးစိုးခိုင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် အ.ထ.က (၅) နေပြည်တော် အထက(၅) နေပြည်တော်မှ အလယ်တန်းပြ ဆရာမ ဒေါ်စိုးစိုးခိုင်အား အလုပ်မှ ထုတ်ပယ်ခြင်းအပေါ် ပညာရေး ၀န်ကြီးဌာနက သြဂုတ် ၃၀ ရက်တွင် ၀န်ထမ်းနှင့် ဆိုင်သည့် အချက်အလက်များအား တရားဝင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်ခြင်း၊ ကျောင်းချိန် နောက်ကျခြင်းများကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း အပါအ၀င် အလုပ်မှ ထုတ်ပယ်သည့် ဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်သည့် အကြောင်းအရာများကို ထည့် သွင်း ဖော်ပြ ထားကြောင်း သိရသည်။
ထိုထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဒေါ်စိုးစိုးခိုင်သည် ပြီးခဲ့သည့် ပညာသင်နှစ်အတွင်း ခွင့်ရက်လေး ရက် ရှိပြီး ကျောင်းနောက် ကျသည့် ရက်မှာ ၄၃ ရက်ရှိသည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ထိုဖော်ပြချက်နှင့် ပတ် သက်ပြီး ဒေါ်စိုးစိုးခိုင်က ''ကျွန်မကို ၄၃ ရက် နောက်ကျတယ်လို့သာ ပြောတာ။ တစ်ခါမှ ကျောင်းစည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့ဆီမှာ လက်မှတ်မထိုး ရသေးဘူး'' ဟု ဒေါ်စိုးစိုးခိုင်က The Daily Eleven သို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
ပညာရေး ၀န်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ထားချက်တွင် ဒေါ်စိုးစိုးခိုင်သည် ၈.၆.၂၀၁၃ မှ ၁၆.၈.၂၀၁၃ အထိ ခွင့်မဲ့ကိုးရက် ပျက်ခဲ့သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ထိုအချက်နှင့် ပတ်သက်ပြီး အမည်မဖော်လိုသူ လက်ရှိ အစိုးရ ၀န်ထမ်း တစ်ဦးက ''ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်တာနဲ့ ပတ်သက်ရင် အများအားဖြင့်တော့ အထက် အရာရှိက သတိပေးလိုက်တယ်၊ လစာဖြတ်တယ် ဒီလောက်ပါပဲ။ အစ်မတို့ ဌာနက ၀န်ထမ်း တစ်ယောက် ဆိုရင် တစ်လလောက် ခွင့်မတိုင်တာတောင် ရှိခဲ့ဖူးတယ်။ အဲဒါ အရာရှိက အိမ်လိုက် သွားပြီး တွေ့ခဲ့တယ် လို့ သိရ တယ်'' ဟု ပြောကြားသည်။ ၀န်ထမ်းတစ်ဦးဟာ အလုပ်နဲ့ ငါးနှစ်အထိ ကင်းကွာခွင့် ရှိပါတယ်။
အစ်မတို့ကျောင်း အပါအ၀င် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ရှိတဲ့ ၀န်ထမ်းအားလုံး ခွင့်မဲ့ မပျက်ကွက်ဖူးတဲ့လူ မရှိပါဘူး။ အစ်မကို ထုတ်သလို ထုတ်ပစ်မယ်ဆိုရင် တစ်နိုင်ငံလုံး ထုတ်ပစ်ရမှာပါ။ ၀န်ထမ်းကို ထုတ်ပစ်နိုင်တာက စာရိတ္တပျက်တာနဲ့ ငွေကြေး အလွဲသုံးစားလုပ်တာ နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်...
၀န်ထမ်းတစ်ဦးအား မြန်မာပြည်တွင်း ခရီးသွားလာခြင်းကို နယ်မြေကန့်သတ် ထားခြင်းအား ဒီမိုကရေ စီစနစ် သို့ ကူးပြောင်းနေသည်ဟု ပြောဆိုနေသည့် တိုင်းပြည် တစ်ပြည်တွင် မေးခွန်း ထုတ် ဖွယ် ဖြစ်နေကြောင်း ဝေဖန်မှုအချို့ ရှိနေသည်။ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများအဖွဲ့မှ ဦးမြင့်အောင်က '' ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေမှာ နိုင်ငံသားတွေဟာ လွတ်လပ်စွာ သွားလာခွင့် ရှိပါတယ်။ ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်တာ၊ နယ်ကျော်သွားတာ ဒါတွေကို တကယ်ဆိုရင် အလုပ်ထုတ်ရလောက်အောင် အပြစ်မကြီးပါဘူး။ ဒီအပြစ်က လာဘ်စားတာလဲ မဟုတ်ဘူး။ မေးခွန်းရောင်းစား တာမျိုးလဲ မဟုတ်ဘူး။ သေချာတာက ထုတ်ချင်လို့ ထုတ်ပစ်တာပဲ ဖြစ်တယ်'' ဟု ပြောကြားသည်။
အလုပ်မှ ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရသည့် ဒေါ်စိုးစိုးခိုင်က ''၀န်ထမ်းတစ်ဦးဟာ အလုပ်နဲ့ ငါးနှစ်အထိ ကင်းကွာခွင့် ရှိပါတယ်။ အစ်မတို့ကျောင်း အပါအ၀င် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ရှိတဲ့ ၀န်ထမ်းအားလုံး ခွင့်မဲ့ မပျက် ကွက်ဖူး တဲ့လူ မရှိပါဘူး။ အစ်မကို ထုတ်သလို ထုတ်ပစ်မယ်ဆိုရင် တစ်နိုင်ငံလုံး ထုတ်ပစ်ရမှာပါ။ ၀န်ထမ်းကို ထုတ်ပစ်နိုင် တာက စာရိတ္တပျက်တာနဲ့ ငွေကြေးအလွဲသုံးစားလုပ်တာ နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်'' ဟု ထပ်မံပြောကြား ခဲ့သည်။
ဒေါ်စိုးစိုးခိုင်အား စတင်စွဲချက် တင်စဉ်က အချက်သုံးချက်ဖြင့် စွဲချက်တင်ခဲ့သည်ပြီး ယခုဝန်ကြီးဌာန၏ ရှင်းလင်း ချက်တွင် ယခင်စွဲဆိုခဲ့သည့် စွဲချက်များအား ဖျောက်ဖျက်ခဲ့ခြင်းမှာ ရိုးသားမှု မရှိခြင်း ဖြစ် သည်ဟု ဒေါ်စိုးစိုးခိုင်က ထပ်မံပြောဆိုသည်။
ဒေါ်စိုးစိုးခိုင်နှင့် ပတ်သက်ပြီး တက္ကသိုလ်ဆရာ၊ ဆရာမများအသင်း ငါးခုက ဒေါ်စိုးစိုးခိုင်အား အလုပ်ဖြုတ် လိုက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပညာရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ ၁၅ ရက်အတွင်း ပြေလည်အောင် မဖြေရှင်းပေး ပါက ပြည်တွင်းပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြေလည်အောင် ဖြေရှင်းရမည်ဟု ကြေညာချက် ထုတ်ပြန် ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
၁ % နှုန်းနဲ့ ပြုတ်မည်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်း ကြောက်
လစ်လပ်မဲ ဆန္ဒ နယ်များတွင် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ များ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိဘဲ လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ်များအား ပြန်ရုပ်သိမ်းခြင်းဥပဒေကို အမြန်ပြု ရန် ဆိုခြင်းသည် စဉ်းစားရန်လိုကြောင်း အမျိုးသားဒီမို ကရေစီ အဖွဲ့ ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောသည်။
“ဒါက လွှတ်တော်မှာ ပါလာပြီးပြီး မကြာခင်ကာ လတုန်းက လစ်လပ် နေတဲ့မြို့နယ်တွေမှာ လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ်တွေ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ တွေ ကို လုပ်ဖို့၊အဲဒါကို ကြတော့ လုပ်ဖို့ မလို သေးဘူး လို့ ပြော တယ်လေ လုပ်ဖို့ အစီိအစဉ် မရှိဘူးဆိုတော့ အဲဒီနေရာတွေ မှာ ပြန်ပြီး အစား ထိုးဖို့ လစ် ဟင်း နေတဲ့ နေရာ တွေ မှာ အစားထိုးဖို့ တောင်မှ အမြန် လုပ်ဖို့ မလို ဘူးဆိုရင် ဒီကိစ္စ ကို ဘာ လို့၃ လတောင်မှ ဘာလို့ မစောင့် စားနိုင် အမြန် လုပ်ချင်ရာ ဖို့ ရာ ဘာ အကြောင်းရှိမလဲဆိုတာ ဒါနည်းနည်း စဉ်းစားရမှာ ပေါ့ ” ဟု ၎င်း ကပြောကြားခဲ့သည်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ လေ့လာ သုံးသပ်ရေး ပူးပေါင်း ကော်မ တီက လေ့ လာ တွေ့ ရှိချက် များကိုဒီဇင်ဘာ လအတွင်း ဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပါ ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ်မှ ရုပ် သိမ်း ခြင်း ပုဒ်မအပါအ၀င် အစီရင်ခံစာ တင်ပြရမည်ဖြစ်၍ အချိန် ကာ လ ၃ လခန့် ကို မစောင့်စားနိုင်ဘဲ မည် သည့် အတွက် ကြောင့် လုပ်ခြင်းသည်ကိုမေးမြန်းလို ကြောင်း ၎င်း ကပြောသည်။ “အခုဒီလို ဆိုင်းငံ့ ထားတာ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနဲ့ မကိုက်ညီ ဘူး လို့ထင်လို့ ချင်ရင်၊ဒါထင်တဲ့ အတိုင်းပြောလို့ ရပါတယ်။
ပြောချင် တဲ့ အဖွဲ့အစည်းက ကျွန်မတို့ လွှတ်တော် အတွင်း ကတော့ ဒီဟာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ် ဆိုတဲ့ အမြင်နဲ့ ဆုံး ဖြတ်လိုက်တာပဲ ။လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ အနေနဲ့ ဒါကို သဘော တူ လိုက်တာပဲ။ ဒီဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ လေ့လာရေးကော်မတီက ဒီကိစ္စကို ကိုင်တွယ် တဲ့ အထိစောင့် လိုက်ပါ ဆိုတာ အန်တီ အမြင်မှာ တော့ ဒါစဉ်းစဉ်း စားစား လုပ်တဲ့ ကိစ္စပဲ ကမှန်းကတမ်းကြီး ဘာဖြစ်လို့ လုပ်ဖို့ က ဘာဖြစ်လို့လို သလဲ ဆိုတာလဲ မေးစရာရှိတာပေါ့ ။ဘာဖြစ်လို့ ဒီလောက်အမြန် ကြီးလုပ်ချင် တာလဲ။ ဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ သုံးသပ်ရေး ကော်မရှင်ကနေ ဒီဇင်ဘာ မကုန်မှီ အစီရင် ခံစာ တင်ရမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လေ”ဟု ၎င်း ကပြောသည်။
ပထမအကြိမ်ပြည်သူ့ လွှတ်တော် သတ္တမ ပုံမှန်အစည်းအဝေး နောက်ဆုံးနေ့ အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးပြီး မွန်းလွဲ (၁၃း၀၀) နာရီတွင်ပြည်သူလွှတ်တော် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး ကော်မတီ ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သည် မီဒီယာများနှင့် လွှတ်တော်ရုံး အမှတ်I-12 တွင် တွေ့ ဆုံစဉ် အထက်ပါ အတိုင်း ပြောကြားခဲ့သည်။“အဲ့လွှတ်တော်ထဲမှာ ဆွေးနွေး တုန်းက ဆုိရင် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် နှစ်ယောက်က ပြန်ပြီး တော့ ဖြေသွားတာတွေရှိတယ်ဦးမောင်တိုး ပြောတဲ့ကိစ္စ ကတော့ အဓိက ကတော့ သိပ် မတည်မငြိမ်မှု တွေ ဖြစ်မယ်ပေါ့။ တစ် ရာခိုင်နှုန်းကို ရှုံးသွားတဲ့သူကနိုင်သွားတဲ့သူကို မကျေနပ် လို့ အကြောင်းရှာ ပြီးတော့ ဒီလိုပြန်ပြီးတော့ ရုပ်သိမ်းဖို့ ဟာကို တင်နိုင်တယ်။
နောက် ဦးဘရှိန် ပြောသွားတဲ့ဟာမှာ ဆိုရင် ဒီလို ဟာတွေကို ခွင့်ပြုထားမယ်ဆိုရင်တောင် အကုန် အကျတွေ ဘယ်လောက်တောင် များမလဲဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်ပါဆိုတော့ တကယ်တော့ လဲ အဲဒါဟာ မှန်ပါ တယ်။ ရွှေး ကောက်ပွဲ လဲ လုပ်ရဦး မယ်။နောက်ပြီး မှ အားလုံး တစ်ခါပြန်ပြီး တော့ လုပ်ရမယ် ဆိုရင်ဒါ Theory အရ ဆို ရင် အဲ လို ဖြစ်နိုင်တယ်နော် ။၁ရာခိုင်နှုန်း ဆိုတာသိပ်များတာလဲ မဟုတ်ဘူး တကယ် ကို တစ်ရာခိုင်နှုန်းက မကျေနပ်တာတွေလဲ ရှိနိုင်တာပဲ ” ဟု ၎င်းကပြောသည်။ ထို့ပြင် ၄င်းက " အဲဒါတွေ ဟို ဘက် ဒီဘက်ကို မီဒီယာတွေရဲ့ အလုပ်ကပေါ့နော် ၊အန်တီ အနေနဲ့ မြင်တာကသတင်းတွေကို ထည့်ယုံ တင်မကဘူး သတင်းတွေကို သုံးသပ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေ မှာ လဲ ရှိတယ် ။အဲဒီတော့ မျှမျှ တတ သုံးသပ်ဖို့ လဲ လို တယ် " ဟု မီဒီယာများနှင့်ပတ်သက်၍ ထပ်လောင်းပြောသည်။ယင်းကိုယ်စားလှယ်အခွင့် အရေးများ ပြန်ရုပ်သိမ်းခြင်း ဥပဒေကို စောလျှင်စွာ ပြုပေးရန် ပြည်ထောင် စုရွှေးကောက် ပွဲကော်မရှင် က ယ နေ့ တွင် ပြည်သူ့ လွှတ်တော် သို့ သ၀ဏ်လွှာပေးပိုခဲ့ရာ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်၊မြိတ်မြို့ မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) ကိုယ်စားလှယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တိုက်ကြီးမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂) ကိုယ်စားလှယ်၊ချင်းပြည်နယ် အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂) ကိုယ်စားလှယ်နှင့် မန္တလေး တိုင်း တံတားဦးမြို့နယ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် စုစုပေါင်း (၄) ဦး တို့ကို ကိုယ်စား လှယ် အဖြစ်မှ ရုပ်သိမ်းပေးရန်တိုင်းကြားထားကြောင်း ပါရှိသည်။
ဆီးရီးယားနိုင်ငံမှာ ဓာတုလက်နက်သုံးတိုက်ခိုက်တယ်လို့ ပြောဆိုမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ အကန့် အသတ်နဲ့အရေးယူ တိုက်ခိုက်ဖို့ စဉ်းစားနေတယ်လို့ အမေရိကန်သမ္မတ Barack Obama က သောကြာနေ့မှာ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆုံးဖြတ်ချက် တစုံတရာတော့ အပြီး မချမှတ်သေး ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
ဆီးရီးယားအစိုးရဟာ ပြီးခဲ့တဲ့လတိုက်ခိုက်မှုမှာ ဓာတုအဆိပ်လက်နက်တွေ သုံးစွဲခဲ့တာကို အမေရိ ကန်ထောက် လှန်းရေး အချက်လက်တွေက ညွှန်ပြနေတယ်လို့ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး John Kerry သတင်းထောက်တွေကို ပြောကြားပြီး မကြာခင်မှာပဲ သမ္မတ အိုဘားမားက အခုလိုပြောခဲ့တာပါ။
ဆီးရီးယားနိုင်ငံ Damascus မြို့တော်နားမှာ ဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုအတွင်း ကလေးသူငယ် ၄၂၆ ယောက် အပါအဝင် အရပ်သား ၁၄၀၀ ကျော် သေဆုံးခဲ့ရပြီး ဒီတိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ပွားခင် သုံးရက်အလိုမှာ ဆီးရီးယား အစိုးရ ဓာတုလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကို အဲဒီဒေသမှာ တွေ့ရကြောင်း အထောက်အထားတွေ ရခဲ့တယ်လို့ ဝန်ကြီး Kerry ကပြောပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ ရော့ကက်ဒုံးကျည်ဟာ ဆီးရီးယားအစိုးရတပ်တွေ ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ နေရာကလာတာဖြစ်ပြီး အတိုက်အခံတွေ ခြေကုပ်ယူထားတဲ့နေရာနဲ့ ဝန်းကျင်ကို ပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယ်။
ဆီးရီးယားအရာရှိတွေက အဆိပ်ဓာတ်ငွေ့သုံး တိုက်ခိုက်တာကို အတည်ပြုကြောင်း ပြောကြားချက်တွေကို ကြားဖြတ်နားထောင်ထားတဲ့ အထောက် အထားတွေ ကိုပါ ထောက်လှန်းရေး အစီရင် ခံစာထဲမှာ တွေ့ရ တယ်လို့ ဝန်ကြီး ကယ်ရီကပြောပါတယ်။
သမ္မတအိုဘားမားက စစ်တပ်ဘက်ကရော သူ့ရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေး အဖွဲ့ဝင်တွေဆီကပါ သတင်း အချက် အလက်တွေ ကို ဆက်ယူနေပြီး အမေရိကန်လွှတ်တော်နဲ့ မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေဆီက အကြံဉာဏ်တွေကိုပါ ယူနိုင်ဖို့ တိုင်ပင်နေ တယ်လို့ အမေရိကန်အရာရှိတွေက ပြောပါတယ်။
လာမည့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ဆီးရီးယားကို စစ်ရေးအရ တိုက်ခိုက်မှု စတင်ဖွယ် ရှိနေကြောင်း ပြင်သစ်နိုင်ငံက စတင် ပြောကြားလိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်၏ အဓိက မဟာမိတ် နိုင်ငံတစ် ခုလည်း ဖြစ်သည့် ပြင် သစ်နိုင်ငံ၏ သမ္မတ ဖရန်ကွိုက်စ် ဟော်လန်ဒေးက မိမိတို့သည် ဓာတုလက်နက်များ အသုံးပြုခဲ့သည့် ဆီးရီးယား အစိုးရအပေါ် အရေးယူရန် အသင့်ရှိနေကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ ဗြိတိန်တွင် မဲခွဲဆုံးဖြတ်မှုအရ ဆီးရီးယားကို စစ်ဆင်မှု ပြုလုပ်မည့် အစီအစဉ်ကို ပယ်ဖျက်ခဲ့သော်လည်း ယင်းအချက်ကြောင့် ပြင်သစ်၏ ရပ်တည်မှုကို အပြောင်းအလဲ ဖြစ်စေမည် မဟုတ်ဟုလည်း ဟော်လန်ဒေးက ဆိုသည်။ "ပြင်သစ်ဟာ ဒမတ်စကက်က အစိုးရရဲ့ မလျော်မကန် လုပ်ရပ်ကို အရေးယူဖို့ လိုလားချက်အတွက် ခိုင်ခိုင်မာမာ ရပ်တည်ပါတယ်"ဟု ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။ ဟော်လန်ဒေးက ဗြိတိန်က စစ်ဆင်ရေးကိစ္စကို နောက်ဆုတ်သွားသော်လည်း ပြင်သစ်ကမူ အစီအစဉ် အပြောင်းအလဲ မရှိဟုလည်း ထပ်လောင်း ပြောဆိုလိုက်သည်။
"နိုင်ငံတိုင်းမှာ လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့် ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဒီလို စစ်ဆင်ရေးမျိုးမှာ ပါဝင်မလား၊ မပါဝင်ဘူးလား ဆိုတာကို စိတ်ကြိုက် ဆုံးဖြတ်ခွင့် ရှိပါတယ်။ ဗြိတိန်က ဗြိတိန် အနေနဲ့၊ ပြင်သစ် က ပြင်သစ်အနေနဲ့ ဆုံးဖြတ်တာ ဖြစ်ပါတယ်"ဟုလည်း ၎င်းက ဆိုသည်။ ဩဂုတ်လ (၂၁)ရက်နေ့က သူပုန်တပ်ဖွဲ့များကို ဓာတုလက်နက်ဖြင့် တိုက်ခိုက်ကြောင်း စွပ်စွဲခံနေရသည့် ဘာရှာအယ်လ် အာဆက်ဒ် အစိုးရကို ပြင်သစ်က ပြစ်ဒဏ်ခတ်ရန် ရည်ရွယ်ပြီး ဖြစ်ကြောင်း ဟော်လန်ဒေးက ဆက်လက် ပြောဆိုသွားသည်။
ဆီးရီးယား အစိုးရက စကာ့ဒ်ဒုံးကျည်များကို နေရာ ရွှေ့ေ...
ဆလီနာသည် လှပပြီး ချစ်စရာကောင်းသူ ဖြစ်ကြောင်း ကယ်လီ...
ဂြိုဟ်တု သယ်ယူရေး ဒုံးပျံသစ် Epsilon ကို ပစ်လွှတ်ရန...
လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး ဥပဒေကြောင့် အမေရိကန် သတို့သားန...
ရန်ကုန်လေဆိပ်နှင့် မြို့တွင်း အငှားကား ၀န်ဆောင်မှု ...
မြေယာအငြင်းပွားမှုကို တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းခြင်းဖြင့်ြေ...
ရန်ကုန် အဝေးသင်တက္ကသိုလ် နှင့် မန္တလေးအဝေးသင် တက္ကသို...
တည်ဆဲဥပဒေ အချို့သည် ပြည်သူများ လိုက်နာရန် ခက်ခဲသော...
ဒေါ်စိုးစိုးခိုင်အား အလုပ်မှ ထုတ်ပယ်ခြင်းမှာ ခွင့်မ...
၁ % နှုန်းနဲ့ ပြုတ်မည်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်းြေ...
ဆီးရီးယားကို အကန့်အသတ်နဲ့တုံ့ပြန်ဖို့ အိုဘားမားစဉ်...